रहस्यमै हिरासतमा थुनुवा मृत्यु प्रकरण – esetokhari.com
छानबिनै छैन त कहिले सकिएला पुलिसको अनुसन्धान ? कहिले पाउलान पीडितले न्याय ? किन चुपचाप छन अधिकारकर्मी ?
२०७९ जेष्ठ २१, शनिबार १६:४३
नेपालगन्ज : बाँकेको इलाका पुलिस कार्यालय कोहलपुरको हिरासतमा केही साताअघि एकजना थुनुवाको मृत्यु भएको घटना सार्वजनिक भएको थियो । केही साताको अन्र्तरमा फेरि अर्का एक जना थुनुवाको हिरासतमा मृत्यु भएको पनि घटना सार्वजनिक भयो ।
सातादिनमा बाँके र रोल्पामा गरी दुई जना थुनुवाले हिरासतमै ज्यान गुमाएका थिए । तर यसको छानबिन तथा अनुसन्धान अहिलेपनि हुन सकेको देखिदैन ।
तत्कालिन अवस्थाका बाँकेका एसपी श्यामकृष्ण अधिकारी कोहलपुरका डिएसपी ऐनबहादुर मल्ल लगायतका सुरक्षा निकायका अधिकारीले यी घटनाको तत्काल छानबिन र अनुसन्धान हुने र घटनाका बारे सत्य सार्वजनिक गरिने बताएका थिए ।
घट्नालगत्तै मानव अधिकारकर्मी, जनप्रतिनिधि बसेर मुचुल्का उठाई पोष्टमार्टका लागि शव भेरी अस्पताल पठाइएको बाँकेका डिएसपी तथा पुलिसका प्रवक्ता मधुसुदन न्यौपानेले बताएका थिए । अस्पतालको पोष्टमाटम रिर्पोट के आयो भन्ने समेत अहिले पुलिसले सार्वजनिक गर्नसकेको छैन ।
यसैबिच नेपालगञ्ज–२ घरबारी टोलका सुन्दर हरिजनको पनि रोल्पा कारागारको ट्वाइलेटमै झुण्डिएर मृत्यु भएको छ ।कारागारमा रहेका विजय विक्रमको सजाय हरिजनलाई भुक्तान गर्न लगाई विजय विक्रम भने कारागारबाट रिहा भइसकेका छन् ।
प्रहरी हिरासतमा मृत्यु भएको घटनाले बांके प्रहरी मातहतका प्रहरी हिरासत कक्ष अब बिस्तारै मृत्यु कक्षको रुपमा परिणत हुदै गएको घटना बिवरणले बताउदै गइरहेको छ ।
केही समयअघि बाँकेको राप्तीपारी भोजभगवानपुरमा पनि प्रहरी हिरासतमा लिएका बाँकेको नरैनापुर गाउँपालिका वडानम्वर ५ का ३५ बर्षिय रामपाल यादबको मृत्यु भएको थियो । उक्त घटना पनि रहस्मय देखिएको छ ।
केही महिना अघि बाँके जिल्ला प्रहरी हिरासत कक्षमा झुण्डिएको अवस्थामा दुई जना कैदी बन्दीको मृत्यु भएको थियो । बाँकेमा यसरी ज्यान गुमाउनेको संख्या बढिरहेको छ ।
सुरक्षाको ग्यारेन्टी लिएर थुनामा राखिएका व्यक्तिकै यसरी ज्यान जानु गम्भीर घटना हो । यसको सरकारी निकायले जति ढाकछोप गरेपनि आफन्तले अधिकाशं घटनामा मृतकको शरिरमा निलडाम देखिएको दाब ि गर्दै आएका छन ।
यद्दपी अहिलेपनि यी कुनै घटनामा छानबिन तथा अनुसन्धान भएको छैन । बाँके पुलिसका प्रवक्ता न्यौपाने जहिले पनि रेडिमेट जवाफ अनुसन्धान भैरहेको छ भन्दा थप प्रतिक्रिया दिदैनन ।